I-HTCManía Launcher, isicelo se-Android se-htcmaniacs | I-Androidsis
Iphepha ekubhekiswa kulo ngeSpanish malunga neetheminali zeHtc, Htcmania, Wenze ifayile ye Ukusetyenziswa kwe-Android Esivumela ngayo ukuba sikwazi ukufikelela ngqo kwiphepha lakho ngaphandle kokuvula isikhangeli kwaye singene kwiintandokazi okanye ngokuchwetheza idilesi yelo phepha.
Le app wenziwe ngu ViercoImodareyitha yeforamu ze-htcmanía kunye nomntu omhle, esivumela ukuba sikhutshelwe kwaye sifakwe kwifayile ye I-Android Market Ukuyibeka njengewijethi kwidesktop yethu kunye nokufikelela kwiphepha elinye lewebhu, ikwabandakanya injini yokukhangela evumela ukukhangela ngokuthe ngqo kwiphepha kwaye ekugqibeleni ukufikelela ngokuthe ngqo kwisitishi sayo se-Twitter ukulandela ixesha laso.
Isicelo esiza kuququzelela ukufikelela kumawaka abasebenzisi beli phepha lewebhu. Zimbini iinguqulelo, enye yeyabanini be Isiphelo sendlela kunye Android 1.5 kunye nenye kubanini beenguqulelo eziphezulu ze Android.
Ngoku siza kwenza isicelo kuVierco kwaye kukuba enze isicelo esipheleleyo se-Android sokukhangela iphepha lakhe, esiza kuthi sonke silixabise, iVercerco, uyayithatha iglavu? 😉
Ulwazi oluthe kratya malunga neHTCMania cupcake Android app
Ulwazi oluthe kratya malunga ne-HTCMania Android app
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-HTCManía Launcher, isicelo se-Android se-htcmaniacs
Unobubele kakhulu 🙂
Enkosi ngophawu lwakho ... kwaye ndiyayibona igloves, ndiyayibona hehehe 😉
Ndinayo kwi-android yam ixesha elide, kubalulekile hehe.